Consumer Society - Isitshayina Uphando - Oxford Bibliographies - Abaqondisi-mthetho ka-China. Zonke Isitshayina abaqondisi-mthetho kwi-intanethi.
Consumer Society - Isitshayina Uphando - Oxford Bibliographies
Ukususela kwezoqoqosho reforms eqala ngowe- kwaye"ukuvula ucango"mgaqo-nkqubo ukuba yalandela, consumer base-China sele attracted i-ingqwalasela ka-bafundisa ezidyunivesitiPhambi ukuba, phantsi Maoist socialism, consumerism waba ideologically ithathwe njengoko bourgeois kwaye waba ngokubanzi suppressed. Abantu' izinto ezikhethekayo ze-banika indlela urhulumente ekuboneleleni subsistence abahlala imigangatho (ukutya rationing, free izindlu, njalo-njalo). Ukusukela ngo, phantsi slogan"ukufumana otyebileyo ngu bubuqaqawuli,"yeshumi ka-izigidi Isitshayina amakhaya zisuke affluent. Isitshayina kubathengi ngoku abanqwenela yanelisa zabo umntu ufuna kwaye kuba kuthetha ukwenza njalo. Ngowe ngaphezu koko, kunye yandisiwe ngamazwe urhwebo, uthungelwano, nokhenketho, Isitshayina kubathengi ingaba kulungile ezifanelekileyo kwaye kufuneka ukufikelela hayi kuphela ngqo iimveliso kodwa kanjalo ukuba kulungile-ezaziwayo ngamazwe brands. Kangangokuba, indlu lwamanzi ngu booming kwaye consumerism sele kuba fashionable.
Kwisithuba esifutshane ngokwe xesha i-consumer society iyakwazi ukuhluma ehlabathini ke, uninzi populous isizwe, into inje ithathwe njengoko i-consumer revolution kwi-China.
Kunye Isitshayina uqoqosho ngoku yesibini likhulu ehlabathini, kwaye anticipated ukuba awuzange ufikelele-United States kwi-kufutshane elizayo, China ke consumer society ngu reshaping kweli lizwe kwaye sele a impembelelo yehlabathi. Jikelele concepts kwaye engundoqo debates malunga consumer society ingaba ngameva Baudrillard kwaye Schor kwaye Holt. Kuba kakhulu imibhalo malunga consumer society, umntu unako siqale Goodwin, et al. Kwimeko-China, ngokubanzi uphando ka-consumer society ingaba kusini na kwi Li (kwi-jikelele trend ka-ukusetyenziswa kwamanzi) kwaye Davis (kunye a kugxila engaselunxwemeni candelo). Ngaphezulu kutshanje, Garner examines kubathengi kwi-isibhozo Isitshayina izixeko, Tang ikhangeleka e consumer kwiimarike kumacandelo ahlukeneyo, kwaye Tian kwaye Dong investigates Isitshayina kubathengi' attitude kwiintlanganiso langaphandle brands. Yinto enye lokuqala imisebenzi lwesiqulatho apho kugxilwa kwi ngxoxo ka-ngokwesiqu media inkcubeko kunye intsingiselo leisure kwaye anomie kwi-affluent societies. Ihlala ingu afanelekileyo ukuba ngoku debates kwi lwamanzi kwaye consumerism. Ezilishumi elinesine abanikeli afumane i-interpersonal zoko ka-eziquqa commercialization. Baya ingakumbi kugxila ukutshintsha umthengi ukuba ezifana luxury izindlu, discos, umbuliso amakhadi, McDonald ke, premium cigarettes, mhlophe wedding gowns, njalo njalo. Ukubhalwa kakhulu yi-nonacademic economists abo ihlole elizeleyo uphando ka-consumer attitudes kwaye uluhlu lwezinto, covering amashumi asixhenxe abantu kwi-isibhozo Isitshayina izixeko. I-yesebe eqokelelweyo ulwazi sijongana macandelo ezifana automobiles, beverages, olwathi izinto, indlu kwaye personal care, luxury izinto, icuba, ezothutho leisure ukuhamba, njalo njalo. Sishwankathela kakhulu imibhalo kwi yokusingqongileyo, kwendlela, kwaye loluntu iziphumo zemisebenzi yokufama a consumer society kwaye umthengi lifestyles. Iphawula imeko ulwazi ngasinye indawo kwaye ichaza apho ezinye uphando ngu luyafuneka. Explores i inyaniso ka-lwamanzi kwaye kuzoba iziphumo zemisebenzi yokufama zexesha elizayo uphuhliso kwi-consumer kwimakethi kwi-China. Imisebenzi ulungiso akuphumi misebenzini kwi-indalo kwaye evolution ka-consumer society, ukususela classics kwi conspicuous lwamanzi kwaye uhlalutyo lomgaqo-affluent societies ukuba namaphepha angama-yi-ezikhokelela oko.
Le ncwadi analyzes China ke ukutshintsha ishishini-bume kwaye examines ye-evolution ye-Isitshayina consumer kwimakethi kumacandelo ahlukeneyo. Oko kuzoba iziphumo zemisebenzi yokufama kuba yehlabathi abanikezeli Le ncwadi examines Isitshayina consumer ukuziphatha, ingakumbi kubathengi' attitudes kwiintlanganiso langaphandle brands.
Uhlalutyo lusekelwe uphando responses ukusuka kwaye interviews kunye Isitshayina kubathengi kunye kwiindawo ezisemaphandleni kwaye basezidolophini. Oxford Bibliographies-Intanethi iyafumaneka nge-umrhumo kwaye perpetual ukufikelela amaziko. Ngolwazi oluthe vetshe okanye uqhagamshelane i-Oxford Iintengiso Ummeli cofa apha.
పరీక్ష ఫోరెన్సిక్-మానసిక - పెద్ద వైద్య విజ్ఞాన సర్వస్వం